China Grooved Concentric Reducer Kugadzira uye Fekitori | Zhihua
Grooved Concentric Kuderedza
Yakagadziriswa Concentric Reducer
Yakagadziriswa Mechanical Tee
Grooved fittings anotendera iko kukurumidza kuungana uye kugadziridzwa kwemahombekombe makuru mapaipi nekuti iwo anopa hukuru hwakasimba pamwe nehukuru hwakatambanudzwa pombi. Izvo zvakare zvakachipa kwazvo kuisa, kuchengetedza, uye kugadzirisa zvekare nzira. Mukukwana kwakatemerwa, dzimba dzekubatanidza dzinotsvedza dzinoenderana nebhaudhi pad; izvi zvinopa kuomesa chiito pamwe neyakagadziriswa, ichipa kuwedzera kuomarara kujoini. Grooved fittings zvakare inokubatsira iwe kubatanidza mapaipi mune mamiriro apo nzvimbo iri pamutengo.
Grooved fittings ane makuru matatu zvikamu: grooves kuenzanisa mapaipi, mabhaudhi ekusungira izvo zvinobatanidza, uye kumanikidza inopindirana yekuisa chisimbiso gaskets kudzivirira kubuda. Grooves ari kumagumo epombi anoita kuti zvive nyore kubatanidza uye kutsemura. Grooved fittings inogona kuchengetedza yako kambani nguva nemari nekuti hazvidi kuwelding, flanging, kana threading.
Makambani ari mune zvekuchera, kuchengetedza moto, HVAC, kurapwa kwemvura yakasviba, uye masisitimu emagetsi anowanzo shandisa mapaipi uye zvinongedzo zvine grooved fittings. Kusiyana neyakajairwa masisitimu umo zvisimbiso zvinoitwa nekumanikidza, aya magaskets ekuisa chisimbiso anogadzira kumanikidza kune kunze kwemapaipi, kuchisimudzira kudzikama kweakakora akakomberedzwa. Nekuda kwekuchengetedzeka kwekuwedzera kwemajoini akakwenenzverwa, iwo anotoshandiswa mumauto nemauto. C-mhando katatu zvisimbiso zverabha zvinoita kudonhedza kusingaite!
Grooved couplings anowanikwa mumhando dzakasiyana senge "kudzikisa", "kusanduka", kana "kuomarara". Grooved fittings inogona kuve nemaflanges, mapfupi radii, madomoni ekupedzisira makepisi (kana "magumo-ese makepisi"), ma tee-maumbirwo (kana "muchinjikwa fittings"), mechina tees, concentric yokuderedza, uye magokora. Yakatemwa magumo makapu akagadzirirwa kuve mugumo-we-iyo-mutsara multifunctional kukodzera. Ivo anoshandiswa mumadonhwe, mapaipi, gaji, madhireni, uye misoro yekusasa. Mechiniki tees dzinokutendera iwe kuti ugadzire zvitoro zvebazi pasina kusimbisa kana kushandisa akawanda mafittings.
• Kurumidza Kuungana
• Nyore Re-Route Systems
4) Grooved yakakodzera haidi:
5) Izvo zvakanakira zvakagadziriswa zvakakodzera:
Dhizaini yekuvandudza inoita nyore, nekukurumidza uye isingadhuri kumisikidza, pasina chikonzero chematurusi akakosha kana kudzidziswa.
• Ungano yekukurumidza nekushandisa yakasarudzika bhaudhi yekubatanidza chigadzirwa chigadzirwa.
• Kuchengetedza kwakakura munguva uye mari zvinobva mukubviswa kwekudikanwa kwekumwaya uye tambo.
• Deredza ruzha uye kutenderera kwekufambisa uye gonesa kuzvidzora kwekubatana.
• Kuchinja-chinja pakurongwa kwemitsetse mumamiriro akaoma.
• Hapana njodzi dzekudonha nekuda kwekuchinja kwetembiricha kana kufamba kunokonzerwa nokuzunza kana kuzunza.
• Inogonesa kushandiswa kwepombi-dzakavakirwa mapaipi, ichideredza zvese huremu nemutengo.
• Kuchengetedzwa kweMoto
• Kuchenesa mvura
• Simba Zvirimwa
mm / mukati Pipe OD
mm Kushanda Kushanda
PSI / Mpa Zviyero
L mm Chitupa
200X150 / 8X6-OD 219.1X165.1 300 / 2.07 127 FM UL
Pashure: Yakagadziriswa Concentric Reducer
Zvadaro: Adapter Flange
Grooved Kuderedza Tee
U-yakasungirirwa Threaded Mechanical Tee
Musangano we "Lean Project Kick-off" weShandong Zhihua Pipe Viwanda Co, Ltd. uye Weifang Huabao Machinery Co, Ltd. yakabudirira
Musangano wepfupi-wepfupi musangano weShandong Zhihua Pipe Indasitiri / Huabao Machinery Lean Promotion Project yakabatwa zvakanaka
Fangan Subdistrict, Dunhu reFangzi, Weifang Guta, 262123 China.
Runhare: + 86-536-7929119